VKontakte - ethandwa kakhulu yokuxhumana ku CIS futhi aphesheya. Ngosizo lwawo, ungenza abangane, ukuxhumana nabo imiyalezo esheshayo, ukwabelana ngolwazi, ukukhuthaza ibhizinisi lakho, udala amaqembu kanye nemicimbi. Inani labasebenzisi bhalisiwe VKontakte lukhula nsuku zonke. Kwabanye, le sevisi - nesikhathi esihle, kodwa kukhona labo are yokuxhumana kusiza ukwenza imali.
Nokho, naphezu kwazo zonke izinto ezinhle, ukususwa ikhasi Facebook - yafuna kukho bese engikhiphela umsebenzisi akusiyo ezingavamile. Kuyini lokhu sidingo? Kungani ukwakha ikhasi, bese susa? Muva nje, VKontakte page ukususwa kwakungenakwenzeka. Umsebenzi isiyatholakala futhi itholakala imenyu "Izilungiselelo zami" ku "Okujwayelekile" ithebhu. Ekupheleni uhlu okukhethwa ahlukahlukene ukumisa ikhasi izilungiselelo kukhona irekhodi, ebhalwe ngamagama amancane, "Ungasusa ikhasi lakho." Ngokuchofoza "ukususa ikhasi lami", uzodinga abonisa isizathu isenzo sakho. Ukusiza ekuphathweni ahlinzekwa ongakhetha ongakhetha kuwo ofanele esimweni sakho imbangela. Lokhu ungathumela kubangani embikweni, okuyinto kuthanda, kanye igama isibongo ekhasini lakho kude. Ingosi yokuxhumana nabantu isikisela ukuthi uma ufuna ukuvuselela i-akhawunti yakho. Kuze kube yimanje, VKontakte basuse ikhasi ngangokunokwenzeka ukuze kwakungeyona neze wehluleke! Iphrofayela nesevisi isithombe, igama kanye nesibongo, ibhalwe ukuthi "Gone", ngaphandle neminye imininingwane contact siyohlala uhlu abasebenzisi, ukusuka kubangani bakho, uzophinde ahlale.
Ngakho, kungakhathaliseki ukuthi ufuna ukususa ikhasi VKontakte? Phela, uma ufuna ukubabulala obsessions abangane, imiyalezo, izicelo, lokho akusho ukukhonza njenge- "susa". VKontakte izilungiselelo elula imenyu elikuvumela ukudala iphrofayela okusekelwe izidingo zakho. ikhasi Tab "Ubumfihlo" ivaliwe ukwenza abasebenzisa isayithi, ngisho nabangane. Ungakha uhlu elehlukile, izotholakala sibhale odongeni, izicelo, izithombe nokunye. Kusukela izivakashi engadingeki zithole ithuba "uhlu black", okuyinto afakiwe idatha labo Sinqanda ukufinyelela emininingwaneni ikhasi. Ukuze hhayi ukususa iphrofayela, kungenzeka ukusula odongeni, ususe abangani nabo ungafuni ukuxoxa, izithombe, amavidiyo kanye amafayela alalelwayo. Ungashintsha imininingwane yokuxhumana, ikheli leposi le ukuthi yabelwe ngamtshela, iphasiwedi. Uma ufuna amanye isikhathi akekho VKontakte akazihluphi wena, khona-ke "Ubumfihlo" ukuze zonke izicelo ukubeka "Cha" noma "mina nje." Ikhasi zizobonakala kubasebenzisi yokuxhumana, kodwa akekho ungabhala imiyalezo, amazwana kokuthunyelwe, izithombe, umeme iqembu ukubona odongeni yakho.
Ukususa ikhasi VKontakte kuwusizo kuphela uma ungenawo bayayisebenzisa ingosi yokuxhumana nabantu izidingo zabo. Khona-ke, ekhasini, ucacise isizathu afanele ukususwa nokubhala i-imeyili kubangane bese uchofoza "Susa ikhasi".
Reindeer Santa Claus - amagama kanye nesimo